ခက်မာ: ညှိမရသေးသောကြိုး 1. 2.
အသက် ၃၀ ခန့်သာရှိသေး၍ ဆံပင်ကိုခေါင်းတုံးဆံတောက်သာသာညှပ်ထားသောထိုလူ၏ရှေ့ တွင် ၀င်ထိုင်မိခြင်းကစတင်သည်ဟုလည်းဆိုနုိုင်သည်။ ထိုသူကငယ်ရွယ်ပျိုမျစ်သည်။ မျက်လုံးပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း၊ နှုတ်ခမ်းထူရဲရဲနှင့်ပြေပျစ်သောနှာတံရှိသည်။ ပြည့်ဖြိုးသောပါးပြင်ပေါ်မှပါးချိုင့်ခွက်ကလေးကိုမြင်စကစိတ်ဝင် တစားကြည့်မိသေးသည်။ သူ့ရှေ့ တွင်ကျမရှိသည်။ သူ့နောက်တွင် ကျမမသိသောရုပ်ထုပေါင်းများစွာ၊ ဓါတ်ပုံ ကားချပ်ပေါင်းများစွာနှင့် အုန်းငှက်ပျောပွဲပေါင်းများစွာရှိသည်။ ကျမ၏အနောက်ဖက်ကျကျဝဲဖက်နံဘေးတွင် အမေရှိသည်။ အုန်းငှက်ပျောပွဲများပေါ်တွင်ထွန်းညှိထား၍ ထွက်လာသောအမွှေးတိုင်၊ဖယောင်းတိုင်တို့၏ အခိုးအငွေ့ များကတော့ အခန်းအနှံ့ တွင်ရှိလေသည်။
“ကဲ…. ငါ့ညီမက ဘုရားကိုအာရုံပြု၊ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုအာရုံပြု၊ ပြီးရင်ဟောဒီကွမ်းရွက် လေးကိုသေသေချာချာဝါး။"
ဆရာဆိုသောပါးချိုင့်ရှင်သည် အောင်မြင်သောအသံနှင့်ကျမအား ထိုသို့စတင်အမိန့်ပေးသည်။ ခံရ ခက်သောဝေဒနာကို အမြန်ပျောက်ကင်းလိုသည့်ကျမက အနည်းငယ်မျှပင်ဆိုင်းငံ့မနေပဲ ကွမ်းရွက်ကိုယူ၍ ၀ါးလိုက်သည်။
“သေသေချာချာ အာရုံပြုပြီးဝါးနော်သမီး၊ ဝေဒနာပျောက်သွားဖို့က အဓိကပါကွယ်။"
ကျမအတွက်သောကပိုနေရရှာသောအမေ့ကို မျက်စိမှိတ်ကွမ်းရွက်ဝါးနေရင်းမှခေါင်းညှိတ်ပြဖြေသိမ့် လိုက်မိသေးသည်။ ကွမ်းရွက်၏ပူစပ်သောအရသာသည် ကျမ၏လျှာကိုလည်းမလှည့်စားရှာပါ။
“ ကဲငါညီမ၊ ဘယ်လိုအရသာရှိလဲ…။"
“ စပ်တယ်။ "
ကျမဖြေသံဆိုသံက တက်ကြွနေသည်။ ဆရာဆိုသူက လက်ဖျောက်တချက်တီးလိုက်၏ ။ ထိုအချိန်မှာပင် ကျမအမှားတခုစတင်ခဲ့လေသလား။
“ကဲ… သေချာပြီပေါ့၊ ဒါဟာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကနှောက်ယှက်ထားခြင်းပဲ၊ ကဲပါလေ..နှောက် ယှက်ထားတယ်ဆိုတာသိမှတော့ နှောက်ယှက်တဲ့လူကိုရအောင်ခေါ်ပြီး ဆုံးမရုံပေါ့။ မပုပါနဲ့ ၊ဆရာ့အမိန့်ကို ဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။"
ထိုစကားကြားရချိန်တွင် တခန်းလုံးမီးခိုးငွေ့ များဝေ့၀ိုင်းနေပြီ။ ဆရာဆိုသူ၏ ရွတ်ဖတ်မန်းမှုတ်သံများ အောက်တွင် အမေသည်လည်း မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းနှင့်စိုးရိမ်ငံ့လင့်နေရှာပြီ။ ကျမကတော့ မျက်လုံးကိုမှိတ်ထား လိုက်ပြီး ကျမခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာမည်ဆိုသည့်ဝိညာဉ်တစ်ခုကို အနည်းငယ်ထိတ်လန့်စွာ၊ ပြီး တော့ စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်ငြိမ်သက်နေမိသည်။
မွှေးအီသော အမွှေးတိုင်ရနံ့များ၊ ဆရာဆိုသူ၏ကြိမ်းမောင်းရေရွတ်သံများမှလွဲ၍ ဘာမှမမြင်ရ၊မကြား ရ၊ ထူးထူးခြားခြားမခံစားရပါ ။
တစ်နာရီဝန်းကျင်ခန့်ထိုင်မိပြီးနောက် ညောင်းချိခြင်းကထင်ရှားလာ၏။ ဆရာဟုပြောတတ်သူက တော့မန်းမှုတ်ဆဲပင် ။
“ကြောက်မနေနဲ့ ၊ ကြောက်မနေနဲ့ ၊ မြန်မြန်သာလာခဲ့။ ဆရာကမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပဲ ဆုံးမမှာပါ။ ကြောက်မနေပါနဲ့။"
စူးရဲချိုအီလွန်းသော အမွှေးတိုင်အနံ့များကြောင့်ခေါင်းတွေလည်းမူးဝေနောက်ကျိလာပြီ။ ညောင်းချိ ခြင်းကိုမခံနုိုင်တော့သည့်အဆုံးခြေထောက်ကိုရွှေ့ ပြောင်းထိုင်မိ၏။
“ကဲ...ကဲ၊ ၀င်ချင်နေပြီမဟုတ်လား၊ ခြေထောက်အနေအထားတွေဘာတွေပြောင်းလို။့ ၀င်ပါ၊ လာပါ၊ ဆရာကြိုနေပါတယ်။"
ကျမခြေထောက်ပြောင်းရွှေ့ မိတာထိုပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ချင်လို့ဆိုပဲ။ ဒါဆိုခြေထောက်ရှိအသွေးအသား၊အကြော အချင်များ၏ဖောက်ပြန်မှုမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကျမညောင်းလှပြီ။ စိတ်ညစ်လှပြီ။ အမေအစိုးရိမ်ပိုလို့ဒီလိုဒုက္ခခံနေ ရတာ။ အမေ့ကြောင့်။ ကျမခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာက ဘယ်နာမ်လောကက ၀ိညာဉ်တစုံတရာရဲ့ ပယောဂမှ မပါဘူးဆိုတာ ကျမသိတာပေါ့။ ခုလောက်ဆို ကျမမလှုပ်မယှက်ထိုင်နေတာ ၃နာရီခန့်ရှိပြီ။ သူ့ကိုယ်သူဆရာ ဟုရည်ညွှန်းတတ်သူ၏ တတွတ်တွတ်ရေရွတ်သံများ။ တခန်းလုံးဝေ့၀ိုင်းမူးအီနေသောအမွှေးတိုင် ရနံ့ များ။
ကျမကမျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်လိုက်သည်။ ကျမရှေ့ တည့်တည့်ရှိဆရာကမျက်လုံးမှိတ်ထားပြီး တတွတ်တွတ်တိုးတိုးရွတ်လျှက်ရှိသည်။ သူတတွတ်တွတ်ရွတ်နေချိန်မှာတောင် သူ့ပါးပြင်ပေါ်ရှိပါးချိုင့်ခွက် လေးကတချက်တချက်ခွက်ဝင်ထင်ရှား၏။ မသိမသာငဲ့စောင်းပြီး အမေ့ကိုကြည့်သည်။ အမေက အခန်းနံရံ ကိုမှီ၍လျော့ရဲရဲထိုင်ကာ ကျမကိုငေးကြည့်လျှက်ရှိသည်။ ကျမသက်ပြင်းချမိပြန်သည်။
ယခုခံစားနေရသော မူးဝေညောင်းညာကိုက်ခဲမှုများမှလွန်မြောက်ရန် တနည်းတဖုံကြိုးစား ရတော့ မည်။ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။
အဖြေဟုမှတ်ယူနိုင်စရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး လက်ရှိအနေအထားကိုမေ့ကာ အတွေးများကို ဟိုးအစသို့ ပြန်ပို့လိုက်သည်။
“ ဒီညလည်း အမေပြောတဲ့ဘီလူးစီးတယ်ဆိုလားဖြစ်ပြန်ပြီအမေ။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ လှုပ်လို့မရဘူး။ အိပ် ပျော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ လှုပ်လို့မရပဲအကြာကြီးဖြစ်နေတော့ကြောက်ပြီး ပြန်လှုပ်လို့ရလာအောင်ကြိုး စားရတာသိပ်ပင်ပန်းတာပဲ။"
“ ဒုက္ခပါပဲသမီးရယ်။ အဲဒါခဏခဏဖြစ်နေတာပဲနော်။လှုပ်လို့ ပြန်ရပြီးအိပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာရော ကြောက်စရာအိပ်မက်တွေမက်တာပဲလား။"
အမေကမီးညှိဟန်ပြင်နေသောပြောင်းဖူးဖက်ဆေးလိပ်တိုကို လက်ညှိုးဖြင့်ဖိသိပ်ရင်းပြန်မေး၏။ အမေ့ မျက်နှာက တကယ်ပင်စိုးရိမ်ရိပ်များလွှမ်းနေသည်။ ဘယ်လိုပြောလျှင်ကောင်းမည်လဲကျမစဉ်းစား၏။ အမှန် အတိုင်းပြောလျှင်လည်း အမေအလွန်အမင်းစိတ်ပူသွားမှာစိုးမိသည်။ အမှန်အတိုင်းမပြောပြန်တော့လည်း ထိုဝေဒနာကြီးပျောက်ကင်းအောင် ဆေးကုဖို့၊ ဆေးသောက်ဖို့ခက်ပေလိမ့်မည်။ အဓိက,ကတော့ထိုသို့ဖြစ်နေ ခြင်းများပျောက်ချင်သည်။ ထို့ ကြောင့်အမေ့ကို အမှန်အတိုင်းပြောဖို့စဉ်းစားလိုက်သည်။
“ ဟုတ်တယ်၊ အိပ်မက်တွေကကြောက်စရာအိပ်မက်တွေလည်းပါတယ်။ နေ့ခင်းမှာကြုံခဲ့သမျှ၊ ပြောခဲ့ သမျှတွေကိုလည်း အိပ်မက်ပြန်မက်တတ်တယ်။ တောင်စဉ်ရေမရပဲ။ အဲဒီလိုအိပ်မက်တွေအမျှင်မပြတ် မက် လိုက်၊ အကြောတွေဆိုင်းပြီး လှုပ်ရှားမရဖြစ်လိုက်နဲ့ ညညဆိုအိပ်ရတယ်လို့မရှိသလောက်ပဲ။"
အမေကကျမမျက်နှာကိုငေးပြီး စကားတွေကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေသည်။တကယ်ပင်ကျမအိပ် ရေးမ၀ဖြစ်တာများလှပြီ။ နေ့ဖက်မှာပြောဆိုဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတွေကို အိပ်မက်ပြန်မက်လိုမက်၊ နောက်နေ့လုပ် ဖို့ဆွဲထားသည့်အစီအစဉ်တွေကို အိပ်မက်ကြိုမက်လိုမက်။ ပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးအများစုပြောနေကြသည့် ဘီလူးစီးသည်ဆိုသော လှုပ်မရ၊ ရှားမရဖြစ်ခြင်းကိုနာရီပေါင်းများစွာကြုံလိုကြုံ။ ကျမခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ အစိတ် အပိုင်းတချို့ အလုပ်မလုပ်တာဖြစ်လိမ့်မည်။ အကြောတွေအားနည်းတာလား၊ အာရုံကြောတချို့ အလုပ်မလုပ် တာလား၊ တစ်ခုခုပေါ့။ ကျမ၏ဝေဒနာရှာဖွေရေးအတွေးက အမေ့စကားကြောင့်ပျက်စီးသွားရသည်။
“ ဒီလိုချည်းပဲခဏခဏဖြစ်နေတော့ အမေသံသယ၀င်လာပြီသမီးရယ်။"
ကျမက ကျမအတွေးကိုတင်ပြဖို့ ပါးစပ်ပြင်ဆဲ အမေကဆက်ပြော၏။
“ဒါဟာ သမီးကိုမနာလိုတဲ့ မကျေနပ်တဲ့တစ်ယောက်ယောက်က နှောင့်ယှက်ထားတာ ပဲဖြစ်မယ်။"
“မဟုတ်ပါဘူးအမေရာ၊ အဲဒါတွေက အကြောတွေမသန်စွမ်းတာ၊ အားနည်းတာ ဖြစ်လိမ့် မယ်။ သမီးရန်ကုန်သွားပြီးဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်မယ်။"
အမေသည် ကျမမျက်နှာအားစိုးရိမ်တကြီးကြည့်၍ လေချိုကလေးနှင့်ဖြောင့်ဖျရှာသည်။
“ရန်ကုန်သွားဖြစ်လို့ဆရာဝန်နဲ့ ပြတာလည်းပြတာပေါ့သမီးရယ်။ ဆရာဝန်နဲ့မပြဖြစ်သေးခင်ခုလော လောဆယ်တော့ ဟိုဖက်ရွာကဆရာနဲ့ ပြကြည့်ရအောင်နော်။ အဲဒီဆရာလေးက အခုလိုအတိုက်အခိုက်တွေ တယ်နိုင်တယ်ဆိုပဲ။ သမီးအဲဒီလို လှုပ်ရှားမရဖြစ်နေတာတွေ၊ အိပ်မက်အမျှင်မပြတ်မက်တာတွေနဲ့ပဲ လူက တဖြည်းဖြည်းပိန်ချိသေးကွေးလာရောလား။ ဒါဟာ တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲ။"
ဘ၀တလျှောက်လုံး မိသားစုကိစ္စ၊အိမ်ထောင်မှုကိစ္စများကြားထဲတွင်နစ်မြုတ်နေခဲ့ရှာသောတောရွာ သူအမေ့ကိုရှင်းပြဖို့ ကျမချက်ခြင်းစကားလုံးရှာရသည်။ စိတ်ဓါတ်အင်အားကိုမွေးမြူရသည်။
“အမေ၊ သမီးက အဲဒါမျိုးတွေချည်းဖြစ်နေတော့ ကောင်းကောင်းအိပ်ရတယ်မရှိဘူး။ အိပ်ရေးမ၀ဘူး။ အိပ်ရးမ၀တော့ စားလို့မ၀င်ဘူး။ အမေစဉ်းစားကြည့်၊ အိပ်ရေးလဲမ၀၊ အစား လည်းကောင်းကောင်းမစားနိုင် မှတော့ အဲဒီလူမပိန်လို့ ဘယ်သူပိန်မလဲ။"
ရုတ်တရက်တော့ အမေနှုတ်ဆိတ်သွားသည်။ ဒါပေမယ့်ခဏပါပဲ။ ခိုင်လုံသည်ဟု သူ့ဘာသာယူဆ ထားသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ထိုဆရာနှင့်ပြဖို့အဆိုကို လေးလေးနက်နက်တင်သွင်းပြန်တော့သည်။
“အေးလေ၊ အဲဒီလိုအိပ်မရအောင်၊စားမ၀င်အောင် တစ်ယောက်ယောက်ကလုပ်ထားတာနေမှာပေါ့၊ ပြကြည့်ရအောင်ပါသမီးရယ်။ အပန်းတကြီးမှမဟုတ်တာ။ ပျောက်သွားတော့လည်းအမြတ်ပေါ့။"
ကျမစိတ်ပျက်လက်ပျက်သက်ပြင်းချမိသည်။ ဒုက္ခပါပဲ။ အမေကတော့ အရမ်းကိုစိတ် အားထက်သန် နေလေပြီ။ ကျောင်းပိတ်တုန်းခဏတွေ့ ရသောအမေ့ကိုပစ်ပစ်ခါခါကြီးလည်း ကလန်ကဆန်မလုပ်ချင်ပါ။ ပြီးတော့ အမေကတကယ်ပဲစိုးရိမ်နေရှာသည်။ အင်းလေ…အတွေ့ အကြုံရတာပေါ့။ ဒီလိုဆေးကုသနည်းမျိုး နဲ့ ကြုံဖူးသွားတာပေါ့။ အတွေ့ အကြုံအသစ်ကို တောင့်တတတ်လွန်းသောကျမ အမေ့စကားကိုလက်ခံလိုက် သည်။
ထို့နောက်တွင်တော့ ပါးချိုင့်ပါသောဆရာလေး၏ရှေ့ ၊ ရုပ်ထုပေါင်းများစွာ၏ရှေ့ ၊ အမွှေးတိုင်ရနံ့ စူးစူး များ၊ မီးခိုးငွေ့ များဝေ့၀ိုင်းနေသောအခန်းတွင်းဝယ် အခုလိုအတွေးကြွယ်စွာ၊ ညောင်းချိစိတ်ပျက်စွာထိုင်နေရ လေပြီ။
“ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင်ကြာနေရတာလဲ။ လာစရာရှိတာလာစမ်းလို့ပြောနေတယ်မဟုတ်လား"
ဆရာ၏ဒေါသတကြီးရေရွတ်သံကိုကြားရ၏။ ကျမဘယ်လိုမှမအောင့်အီးနိုင်တော့ပါ။ တကယ်ရှိနေ တယ်ဆိုရင်လဲ ကျမခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမြန်မြန်ဝင်လှည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့ရယ်ဟု ကျမကိုယ်တိုင်ပင်ပင့်ဖိတ်မိ၏။ မြန် မြန်ဝင်လျှင် မြန်မြန်ကိစ္စပြီးမည်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမထူးခြားပါ။
စကားပြောမည်ပြင်ဆဲကြားလိုက်ရသော အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံကိုစောင့်ပြီးမှ ကျမပြောလိုက်သည်။
“ကျမညောင်းလှပြီ။ ဆက်မထိုင်နိုင်တော့ဘူးဆရာ။ ဆရာ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာလည်းဝင်မလာပါဘူး။ ခရီးလွန်နေကြတယ်ထင်ပါရဲ့ ။ တော်ပါပြီ ဆရာရယ်။ ခေါ်မနေပါနဲ့ တော့ ကျမညောင်းလွန်းလို့ပါ။"
ကျမစကားကြောင့် သူကမျက်လုံးများဝိုင်းလာသည်အထိပြူးကာကျမကိုကြည့်၏။ ရုတ်တရက်ဘာပြန် ပြောရမှန်းသိဟန်မပေါ်ပုံနှင့် နှုတ်ခမ်းတင်းတင်းစေ့ကာ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်နေလေသည်။
“ အင်း..အင်း..၊ ငါ့ညီမကအတော်စိတ်ခိုင်တာကိုးကွဲ့ ။ ဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေ အလွယ်တကူဝင်လို့ မရတာ။ ခုနအိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးတာကြားလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါအချက်ပေးတာပဲ။ သူတို့ အနားမှာရှိ တယ်တဲ့၊ ဒါပေမယ့် ကာယကံရှင်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကမပျော့ပျောင်းတော့ သူတို့ ပူးလို့ဝင်လို့ မရဘူးဆိုတာ အိမ်
ကျမကြိတ်ပြုံးလိုက်သည်။ အမေကတော့ စိတ်ဝင်စားသောမျက်လုံးများနှင့် မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ် ခတ်လုပ်ကာ ဆရာ့စကားကိုနားထောင်ထောက်ခံ၏။
“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျမစိတ်တွေမခိုင်မာတော့တဲ့အချိန်ကျမှ ထပ်ကြိုးစားကြည့်ကြသေးတာ ပေါ့။ ခုတော့ ကျမအရမ်းညောင်းနေပြီ၊ ဘယ်လိုမှဆက်မထိုင်နိုင်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ ကျမစိတ်ကချက်ချင်း ကြီးလည်းပျော့ပျောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ကျမကိုပြန်ခွင့်ပြုပါဦးဆရာ။"
ညောင်းညာထုံကျင်နေသောခြေထောက်များကို ကြိုးစားပန်းစားသယ်မ၍ ဆရာ့အိမ်ပေါ်မှကသော ကမျောဆင်းလာချိန်တွင် ဆရာဆိုသူမည်ကဲ့သို့ကျန်ခဲ့မည်ကို ကျမမစဉ်းစားတော့ပါ။ ဖိနပ်စီးလိုက်ချိန်တွင် ရေဒီယိုမှ ညခုနှစ်နာရီထိုးသံကြားလိုက်သည်။
နောက်တနေ့ မနက် အိပ်ရာမှထလျှင်ထချင်း ကျမမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း အမေကဆီးမေး၏။
“ညက လှုပ်မရတာပိုကြာတယ်အမေ။ အဲဒါ မနေ့ တုန်းက လေးနာရီဝန်းကျင်လောက်မလှုပ်မယှက် ထိုင်ခဲ့ရလို့ပေါ့။ ပြီးတော့ ညတုန်းကအိပ်မက်တွေကပိုကြာတယ်၊ ပိုပြီးပီပြင်တယ်။ ဆရာလေး စကားတွေ တတွတ်တွတ်ရွတ်နေတာလည်းပါတယ်။ ကွမ်းရွက်ကျွေးတာရော၊ ဆေးလုံးလေးပေးတာရော၊ ကြမ်းပြင်ကို ကြိမ်လုံးနဲ့တရွှမ်းရွှမ်းရိုက်နေတာရော။ မီးခိုးငွေ့ တွေ၊ အမွှေးတိုင်တွေလည်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အိပ်မက်ထဲမှာ ဆရာလေးရဲ့ ပါးချိုင့်လေးပါတာကိုတောင် ထင်ထင်ရှားရှားမှတ်မိနေသေးတယ်။ တစ်ညလုံးနီးပါး အိပ်မရဘူး အမေ။ အခုခေါင်းတွေကို မုးနောက်နေတာပဲ။"
ကျမ၏မုသားမဲသောအဖြေစကားအတွက် အမေ့မျက်နှာကို ရဲရဲကြည့်ပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေသည် မနေ့ညနေစောင်းက ဆရာဆှိုသူ၏ရှေ့ တွင်မြင်ခဲ့ရသော မျက်လုံးထက် ပို၍၀ိုင်းသော မျက်လုံးအစုံနှင့်ကျမကိုကြည့်ကာ သူမရင်ဘတ်ကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်စုံဖိထားလေသည်။